Semalt Inoponesa 7 SEO Nzira Dzakagadzirirwa Kurapa Vanopa Vana
Search Engine Optimization (SEO) inoita kuti nzvimbo yako inogona kuwanikwa apomunhu anogadzira mubvunzo mukutsvaga injini. Semuenzaniso, kana webhusaiti yevashandisi ari kutsvaga chikwata chemapurisa munzvimbo yeBoston, uye ikokovari vazhinji vevanhu vari munzvimbo iyo, zviri pachena, unoda kuti tsika yako iite sechinhu chokutanga pane zvitsvakurudzo.
Mutengi Wekutengesa Mubudirira we Semalt ,Jason Adler anopa zvinomwe zvinogadzirisa SEO tricks uye mazano ekupa sangano rako kukwikwidzana kwakakwikwidzana muhutano hwehutano uyekukubatsira iwe kuti uone zvakakwirira mumigumisiro yekutsvaga.
1. Sarudza Kodzero Dzakakosha
Ita runyoro rwakakwana rwemashoko ayo, iwe unofunga kuti vanhu vanofananidzapavanenge vachitsvaka rubatsiro rwekurapa uye zvipatara - шины. Mushure mekubatanidza urongwa hwemashoko ekutsvaga, chengetedza kubudirira kwavo nekushandisaGoogle's Keyword Planner. Chiyero chichati chirevo chemashoko ane tsvakiridzo yekutsvakurudza yakawanda pamwedzi, asi nekunakwikwidzanakubva kune dzimwe nzvimbo.
2. Wedzera Meta Data Yako: Meta Tsanangudzo uye Title Tags
Mashoko akabatanidzwa neSeO yako maitiro anofanira kunge aripo mumetadataye peji rimwe nerimwe uye nezvose zvinyorwa zvewebsite yako. Metadata ine meta tags ye HTML iri pakati pekuvhara uye musoro wakashamatags pane HTML cypher yefaira. Meta data inobatsira injini yekutsvaga kuti ione kuti peji iri pamusoro pei apo tereti yenyaya inonzwisisikasechinyorwa chepeji.
3..Shandisa Plagiarism-Free Content
Ita zvakasiyana-siyana zvayo panzvimbo yako yepaiti panzvimbo yechinzvimbo chako chekurapa kuti uonekuti inomira uye inokupa makwikwi ekukwikwidza mumutambo. Kuzivisa vateereri vako nekushandisa kwehuwandu hwekugadzirwa kwehutano kunoita kuti zviitikekuti uratidze unyanzvi hwako uye kukosha uye pakupedzisira, uwane hutsva mukutsvaga injini.
4. Iva nechokwadi chokuti Une Chivako cheSpaiti paWebsite Yako
Kugadzira mapepa epaji ari nyore kunowanzonyengedza kusanganisa kwakosite nekutsvaga injini. Mepu inopa kunzwisisa kwe Yahoo, Bing uye kunyange Google pane nzvimbo yako yakagadzirirwa uye yakabatana.
5. Ive Akasiyana-siyana Kutsvaga Zvimwe
Nyanzvi dzakawanda dzehutano hwehutano dzinoshaiwa mukana wekukwirira zvakakwirira uchishandisa mashizha,mavhidhiyo, mifananidzo uye mamwe maitiro anobatana. Zadza webhusaiti yako neyakakodzerwa zvakagadziriswa zvinyorwa uye ubatsire kubva kushandisa maitiro akasiyanayekutsvaga zvakashata.
6. Local Local Advertising
Inopfuura hafu yenguva yekutsvaga inourawa kuburikidza nokushandiswa kwemafoni efoni. A localkutsvaga chinhu chakakosha chesangano rekuchengetwa kwezvokurapa sezvo varwere vachifanira kushanyira nzvimbo chaiyo yezvivako vasati vasvikashandisa mabasa avo.
7. Shandisa Nzvimbo dzeNzvimbo dzeNzvimbo kusvika kuBoost Rankings
Zvemagariro evanhu anofambisa motokari kunzvimbo yako uye inofambisa nzira mbirikushamwaridzana pakati pomunhu anogara nesangano. Nzvimbo dzekugara dzevanhu dzinobata SEO mukati menyaya yekubatanakuvaka nekugadzirisa kushanda.
Achiri kukanganisa kukosha kwe SEO mubasa rako? Parizvino inopfuura 55 muzanayevakuru muAmerica pachake mafoni, ayo anoratidza kukosha kwekukwirira kwakakwirira mumigumisiro yekutsvaga inogona kuve nevarwerevachitsvaga kubva kumashandisirwo avo uye kubva kuDVD desktop. Kutevedzera maitiro ataurwa pamusoro apa, iwe uchawedzera paIndanetikuvapo kwetsika yako uye kusvika kune vatsva.